Website တစ်ခု Launch လုပ်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ | Tree Myanmar
သင့်ရဲ့ Website ကို Launch လုပ်လိုက်ပြီးနောက် လုပ်စရာ အချက်လေးတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ထိုအချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ သိသလောက်လေး ပြောပြပါမယ်။
1. Page Tile တွေ နဲ့ SEO description တွေ မှန်မမှန်စစ်ပါ။ စာမျက်နှာတိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Featured Image တွေ လည်း ရှိသင့်ပါတယ်။ Featured Image က သက်ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာပါ Title နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ပုံတွေ ရွေးသုံးပေးဖို့သင့်ပါတယ်။
2. Sitemap.xml File နဲ့aRobots.txt File ဖန်တီးပါ။ Sitemap ဆိုတာက Website အတွင်းမှာပါ၀င်တဲ့ URLs အားလုံးရဲ့ List ြဖစ်ပါတယ်။ Sitemap ကို ဖန်တီးဖို့ Website တွေလည်းအများကြီးထဲမှာမှ XML-Sitemaps.com ကို recommand ပေးချင်ပါတယ်။ Robots.txt file ဆိုတာက သင့် website ကို ဘယ်လင့်ကတော့ ၀င်ရောက်ဖို့ ခွင့်ပြုသင့်တယ်၊ ဘယ်လင့်ကတေ့ာ ၀င်ရောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်။ Sitemap နဲ့ Rebots file တွေထားရှိခြင်းက Search Engine ကို အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်။
3. သင့် Website ကို ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်နေရာက ဘယ်စာမျက်နှာတွေကို ဘာ device နဲ့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ Google Analytics နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ လိုပါတယ်။ Google Analytics က ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
4. Web Master Tools ဖန်တီးပါ။ သူက Google Analytics လောက်လူသိမများပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Website Owner တွေအနေနဲ့ ရှိထားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ သူက သင့် Website ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမကောင်း၊ Mobile Friendly ြဖစ်မ ဖြစ်၊ Speed ြမန်မ မြန် အစရှိသဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ Tool တစ်ခုပါ။ ဒီလင့်မှာ Google Webmaster Tools Set up လုပ်လို့ရပါတယ်။
5. သင့် Website ရဲ့ Search Engine Ranking ကို စစ်ဆေးပါ။ Firefox Browser မှာ Keywords တွေကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ Add-ons တချို့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ Rank Checker လိုမျိုးပေါ့။ Ranking Result ကို သင်စိတ်တိုင်းမကျရင်တော့ SEO Specialist တစ်‌ယောက်နဲ့ ဆွေး‌‌နွေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
6. သင့် Website ကို Dmoz ဆိုတဲ့ website မှာ submit လုပ်ပါ။ ဘာကြောင့်ဆို Google က သင့် website ရှိမရှိ Dmoz မှာ စစ်ဆေးတတ်လို့ပါ။ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆို Search Engine အတွက် တချို့ အမှတ်လေးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ Dmoz က သင့် website ကို Approve ပေးဖို့ အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လနဲ့တောင်ချီနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပူပြီး ထပ် Submit မလုပ်မိပါနဲ့ (6 လအတွင်းမှာပေါ့)။
7. Website တစ်ခုရဲ့ အမြန်နှုန်းကလည်း Search Engine Ranking တက်စေဖို့ အထောက်အကူ တစ်ခုဖြစ်တာမို့ Site Speed ကို စစ်ဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ free site တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ စစ်ဆေးကြည့်ပြီး website ရဲ့ အမြန်နှုန်း တိုးလာအောင် ပြင်သင့်တာပြင်ရပါမယ်။